Dawlada Somaliya Oo Hanjabaad Ka Soo Saartey Doorashada Jubbaland | Gaaroodi News
Dawlada Somaliya Oo Hanjabaad Ka Soo Saartey Doorashada Jubbaland
Muqdisho (Gaaroodinews) Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ayaa war qoraal ah kasoo saartay arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo bishan lagu wado in ay ka dhacdo magaalada Kismaayo.
“Wasaaraddu waxa ay caddaynaysaa in aan la aqoonsan karin natiijada kasoo baxda doorasho baal marsan qodobbada kor ku xusan iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka” ayaa lagu yidhi warka qoraalka ah.
Wasaaradda ayaa soo bandhigtay saddex qodob oo ay doonayso in ay fulaan si doorashada ay u noqoto mid xor iyo xalaal ah. Waxaa ka mid ah in diiwaanka magacyada odayaasha dhaqanka soo xulaya odayaasha ay noqdaan kuwa rasmiga ah, waafaqsana kuwa ka diiwaangashan wasaaradda, iyo in diiwaangalinta musharixiinta madaxweynenimada uu sameeyo guddi laga xulay baarlamaanka iman doono, iyo sidoo kale in doorashada ay u dhacdo qaab xor iyo xalaal ah, sida qoraalka lagu sheegay.
Warkan ayaa soo baxay maalin kadib markii wafti ka socda urur goboleedka IGAD uu ka laabtay Kismaayo, war uu soo saarayna ku sheegay in ay lagama maarmaan tahay in Kismaayo ay ka dhacdo doorasho daahfurnaan ah.
Urur ay leeyihiin siyaasiyiin shaaciyay in ay yihiin musharixiin u taagan xilka madaxtinimada Jubbaland oo isbadel doon ah ayaa shalay ku dhowaaqay guddi doorasho oo aan ahayn kan maamulka Jubbaland ay horey u dhiseen.
Musharixiintan ayaa sheegay in kalsoonidii ay kala laabteen guddiga hadda jira, iyaguna iskood u qabsanayaan doorasho madaxtinimo.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamsa Cabdi ayaa dhawaan BBC-da u sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha ay usoo gudbiyeen min saddex xubnood oo musharixiinta xildhibaanada ah, kuwaas oo laga sii dhex xuli doono qofka noqonaya xildhibaanka.
Tan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay ka biyo diidsanyihiin musharixiinta isbadel doonka.